Ifayibha Umthambo Isinxibelelanisi esiKhawulezayo, i-Optical Fibre yokuXhobisa ngeNtambo-Qingying
Ifayibha Umthambo izihlanganisi Fast
Ifayibha Umthambo MPO
Iphothifoliyo yethu ebanzi kwaye ekhethiweyo ye-fiber optic yeemveliso ezihamba kunye nobukho bethu bobuchwephesha ziqinisekisa ukuphendula kwabathengi ngokukhawuleza, ubuchule bobuchwephesha, kunye nokuzimisela ukusebenza ngayo nayiphi na imiceli mngeni enokubakho kumashishini amancinci nakwizinga elikhulu.
Iqela elikhethiweyo le-R & D
Ukuboniswa kwezixhobo zovavanyo
Uvavanyo lweSleeve yeZirconia
Umzobo we3D weMveliso
I-Assembly Connector ekhawulezayo
Indawo yokuvelisa iadaptha
Ifayibha yePatch Cord yokuvelisa indawo
Isinxibelelanisi se3D seFayibha
Ukupheliswa kobuso bokugqibela
Ukufakwa kunye noVavanyo lweLahleko yoVavanyo
Yasekwa ngonyaka ka-2010, iDongguan Qingying Industrial Co., Ltd. (QY) yinkampani yefibre ephucukileyo ebekwe kwizixeko ezibini, iDongguan kunye neChongqing, e-China. Ngaphezulu kwe-10,000m2 yendawo yezityalo, i-QY ngoku iyinkampani enobuchule obudibeneyo be-R & D, imveliso, urhwebo kunye nentengiso yamanye amazwe. I-QY yi-ISO9001, i-ROHS, inkampani eqinisekisiweyo ye-CE enamakhulu abathengi eYurophu, eMelika, kwi-mpuma ye-Asia nase-Australia. Iimveliso zethu ezingundoqo ifayibha optic endle isinxibelelanisi installable (isinxibelelanisi fast), iadaptha, patch intambo, patch iintambo vehicles, pigtail, PLC yokuchaka, attenuator, kunye nezinye iimveliso ezininzi FTTH. Ngamava eminyaka eli-12 kushishino lwefayibha, i-QY ikholelwa ekubeni ukufunda, ukusebenzisana, kunye nokwabelana nabathengi yeyona ndlela ingcono yokukhula kunye nabathengi. Kule minyaka ilishumi izayo, i-QY iya kuphuhlisa ngamandla ukuvelisa iimveliso ezintsha ngokweemfuno zabathengi, kunye nokuphucula umgangatho weemveliso ezikhoyo zabathengi. Bonke abasebenzi be-QY bajonge phambili ekusebenzeni nasekusebenzisaneni nabathengi kwishishini le-fiber kwixa elizayo.
Namhlanje iQingying yamkelwe kakuhle kushishino lonxibelelwano lwefayibha ngabathengi behlabathi.
Abathengi bethu Namhlanje Qingying yamkelwe kakuhle kushishino unxibelelwano ifayibha optic ngabaxumi ehlabathini lonke. Isiko lobunkokheli kwitekhnoloji, umgangatho wemveliso kunye nenkonzo yabathengi yenze ukuba inkampani ikhule ngokukhawuleza uQingying ngoku wenze inkqubela phambili. Wle uyaqhubeka nokuhamba ngesantya esikhulayo kunye nokuzama ukugqwesa.
Isidibanisi seDuplex, Isinxibelelanisi esikhawulezayo, Ifayibha isinxibelelanisi esikhawulezayo, Isixhobo soNxibelelaniso seNdawo, Ifayibha Umthambo isinxibelelanisi amaqhoshana, Ifayibha Umthambo Cable izihlanganisi,